Izindaba - I-Genzon Novel Equipment, eyethamela i- "2019 Suqian Green Industry Expo"
Ngomhlaka 28 kaSepthemba, umcimbi wasendaweni we-2019 Suqian Green Industry Expo wabanjelwa ukuvulwa okukhulu esikhungweni saseSuqian Exhibition. Ingqikithi yale Green Fair ithi "luhlaza, ukuhlanganiswa nokugxuma", Gxila embonini eluhlaza kanye nomnotho wezemvelo ukwenza izingxoxo zezomnotho nezentengiso, ukukhuthaza ukuhlanganiswa kokuqanjwa okusha kwesayensi nobuchwepheshe kanye nentuthuko yezimboni, futhi kubuye kuqoqe umfutho omusha wegreen green ukuthuthukiswa kwe-leapfrog
IGenzon Novel Equipment, njengebhizinisi lendawo elidumile, ilethe imikhiqizo yayo yezobuchwepheshe ethuthukile embukisweni. IGenzon Novel Equipment ibuye ikhombise uchungechunge lwayo lomkhiqizo oyinhloko: Ifilimu eyisisekelo yokuPakisha, ifilimu yokuvikela isisekelo seKhadi, iDedel base film, ifilimu yokuvikela isisekelo, ifilimu ye-Bronzing base, ifilimu engu-Transfer base, nefilimu le-Lurex base base, ifilimu leTangle. Izinga laheha ochwepheshe bezimboni nabantu abanentshisekelo.
I-2019 Suqian Green Industry Expo ingumcimbi omkhulu kakhulu futhi onomthelela omkhulu eSuqian, hhayi nje kuphela ipulatifomu ebalulekile yokuqinisa ezomnotho, ukuhwebelana ngokuhwebelana kanye nokubambisana kwezimboni, kepha futhi kuyindawo enhle yokusakaza yomkhiqizo. Izinto ze-Novel ze-Genzon ezihambele umcimbi, azithuthukisi ukuthandwa kwangaphandle kuphela, kepha futhi zandisa ithonya lomkhiqizo.